Tsy afaka manafatra .ova ao anaty Virtualbox (Vahaolana) | Avy amin'ny Linux
Tao anatin'izay andro vitsivitsy izay dia nesoriko ilay ranom-boankazo virtualization amin'ny fampiasana Virtualbox, satria mampiditra rindrambaiko mivantana amin'ny masinina virtoaly aho izay afindra any amin'ny lozisialy farany na tontolon'ny fampandrosoana, izany rehetra izany dia natao hanolorana vahaolana izay mila ampidirina ao anaty Virtualbox fotsiny mba hampiasaina eo noho eo. Tena foto-kevitra ijoroan'ny olona avy io TurnKey LinuxFantatro manokana ity fomba fizarana zavatra ity ary mieritreritra aho fa toa mahomby.
Anisan'ireo fanafarana sy fanondranana masinina virtoaly marobe, nanana olana tamin'ny iray amin'ireo solosaina vahiny aho ary io no izy dia tsy namela ny fanafarana .ova amin'ny Virtualbox, zavatra liana be satria ilay .ova mitovy dia azo ampidirina amin'ny solosaina hafa miaraka amina kinova iray ihany. Mbola tsy fantatro ny niandohan'ny olana, fa raha mahita vahaolana aho hahafahako mampiasa ilay .ova resahina tsy misy olana dia tsotra ny dingana ary hozaraiko eto ambany izy ireo.
Vahaolana amin'ny olan'ny tsy afaka manafatra rakitra ova ao amin'ny Virtualbox
Tokony hanazava izany aho ity fomba ity dia tsy mamela ny fanafarana rakitra Ova simba, ka raha tsy avelan'ny virtualbox hanafatra ianao satria tsy feno ny rakitra na manana olana amin'ny fandikana ianao dia tsy mandeha io fomba io. alao antoka fa mandeha tsara ny rakitra .ova anao.
Raha manafatra fitaovana virtoaly ao anaty boaty virtoaly ianao, dia mahazo hafatra diso toa ilay iray amin'ity sary manaraka ity, ny fomba resahina dia mety hamaha ny olanao
Ny zavatra voalohany tokony hataontsika dia ny manokatra fantsona ao amin'ny lahatahiry misy ny rakitra .ova voalohany, avy eo dia manatanteraka ity baiko manaraka ity izahay mba hamaha ny zanabolana .ova amin'ny toerana tiantsika.
Ity baiko ity dia mamoaka ireo rakitra telo misy ova ao: ny .vmdk, .ovf ary .mf, ny rakitra izay mahaliana antsika dia ilay VMDK (.vmdk) (Virtual Machine Disk) izay misy ilay fampahalalana kapila misy ao amin'ny fitaovanao virtoaly.
Ny zavatra manaraka tsy maintsy ataontsika dia ny mankany amin'ny virtualbox ary mamorona milina virtoaly vaovao miaraka amin'ny fikirakira azy tahaka ny voalohany, izany hoe ny maritrano sy ny rafitra fiasa mitovy aminy, ho fanampin'ny fanampiana ny isan'ny ondrilahy tiana hampiasaina, amin'ny farany tsy maintsy misafidy ny hampiasa rakitra rakitra kapila mangatsiaka efa misy isika ary hisafidy ny .vmdk izay nohafarantsika tamin'ny dingana teo aloha.
Ary farany, mamorona ny milina virtoaly isika ary afaka mihazakazaka ny tontolo virtoaly tsy misy olana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » Tsy afaka manafatra ny .ova amin'ny Virtualbox (Solution)
Ludwing dia hoy izy:
Tsy manao na inona na inona io baiko io, na tsy haiko raha manao ratsy aho, manampy
Mamaly an'i Ludwing
Fa maninona no aleontsika ny tsipika komandy noho ny GUI?